Codsiga Kaalmada HomeHelpMN - HomeHelpMN
Codsiga hadda Furan yahay
Codsiga Kaalmada HomeHelpMN
HomeHelpMN waa barnaamij ay bixiso Minnesota Housing si ay ugu caawiso dadka ka dib dhacay rahmaadda ama amaahda guriga ama macluumaadyo kale oo ah kharashaadka guryaha oo uu sababay COVID-19. Haddii ay noqoto bixinta kaalmo dhaqaale ama in lagugu hago meelo la aamini karo, waxa aan rabno waa in aad hesho caawimaadda aad u baahan tahay, wakhtiga aad ugu baahi badan tahay.
Ha lagaa caawiyo bixinta rahmaadda lagugu leeyahay
Haddii aad ka dibdhacdo bixinta rahmaadda ama lacagta amaahda gurigaaga, waxaad xaq u yeelan kartaa kaalmo dhaqaale oo aad isaga bixiso rahmaadda lagugu leeyahay.
Ha lagaa caawiyo kharashaadka kale ee lagugu leeyahay
Waxa laga yaabaa in ay kugu adag tahay in aad bixiso kharashaadka kale ee guryaha sida cashuurta guryaha, ceymiska, lacagaha ururka guryaha ama kirada dhul bannaan. Waxaan kaa caawin karnaa kharashka noocaas ah.
Hel tasiilaad aad uga fogaato in guriga lagaala wareego
Si aad u hesho tasiilaadka kale ee la hayo, kala hadal la-taliyaha rahmaadda. Booqo bogga Macluumaadyada si aad faahfaahin u hesho.
Muddada la Codsan karo: Maajo 17 – Juun 17 markay tahay 5:00 p.m.
Arjiyada waxaa la howlgelinayaa hadba marka la soo gudbiyo. Haddii ay dhacdo in baahida lacageed ay badantahay, waxaa laga yaabaa in lacagta si buuxda loo qoondeeyo kahor inta aan la gaarin taariikhda arjigu xirmayo. Milkiilayaasha guryaha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay soo gudbiyaan arjiyadooda horraanta muddada codsiga. Haddii arjiyada la helo muddada arjyadu furanyihiin ay ka badanyihiin maalgelinta/lacagta la hayo, codsadayaasha waxaa laga yaabaa in la geliyo liiska sugitaanka. Arjiga oo la soo gudbiyay ma dammaanad qaadayso in la heli karo maalgelinta.
Ka bilow in aad la soo degto waxyaabaha Diyaargarowga Codsadaha
1. La soo deg Waxyaabaha "Diyaargarowga"
2. Sameyso kadin ama summad aad ku soo gudbiso codsigaaga
Sameyso kadin ama summad aad ku soo gudbiso codsigaaga▶
Waxaa lala xiriirayaa meelaha lacagta kugu leh
Codsiga ayaa laga shaqeynayaa
Lacagta ayaa la siinayaa meelaha lacagta kugu leh
Si aad xaq ugu yeelato kaalmada HomeHelpMN
Waa in aad leedahay guri ku yaalla Minnesota oo aad ku dhex nooshahay
Waa in uu dakhligaagu yahay mid ka hooseeya xadka dakhliga halkan ku qoran
Waa in ay ku soo martay dhibaato dhaqaale intii ka dambeysay 21kii Jannaayo, 2020
Waa in lagugu leeyahay kharashaad hore ah oo ah mid ama wax ka badan kharashka uu barnaamijkan bixinayo
Booqo bogga su’aalaha iyo jawaabaha si aad ugu hesho faahfaahinta dheeraadka ah ee xaqa loogu yeesho.
Milkiileyaasha waxay xaq u yeelan karaan ilaa $35,000
Kaalmada waa in loo isticmaalo kharashkii hore keliya
Lacagta waxaa si toos ah loo siin doonaa meelaha kugu leh, shirkadda rahmaadda ama maamulka deegaanka
Kaalmadan ma ah mid la iska rabo in la soo celiyo
Waxaa loo isticmaali karaa: bixinta amaahda, heshiiska sabarloogada, amaahda guryaha la soo warshadeeyey, cashuurta guryaha, ceymiska guriga, milkiileyaasha ama khidmadaha ururka guriga, kirada dhulka guryaha la soo warshadeeyey
Kharashka korontada iyo biyaha barnaamijkan ma bixiyo—kaalmada lacagta kuleyliyaha, korontada iyo biyaha waxaa laga codsan karaa Barnaamijka Caawinta Korontada ama in la garaaco 800-657-3710 (taabo 1)
Muddada la codsan karo: Maajo 17 - Juun 17 markay tahay 5:00 P.M.
Dadka bulshadaada la sii wadaag HomeHelpMN
Dadkoo dhan u sheeg barnaamijka HomeHelpMN oo adiguna hel macluumaad, sida warbaahinta baraha bulshada, boorarka xayeysiiska, waraaqaha warbixinta, iyo waxyaabo kale oo badan.
Dadka la sii wadaag HomeHelpMN